सडकमा जुलुस ल्याएर न्याय पाइँदैन: जुलुस गर्न हामीसँग पैसा छैन: देउवा - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
सडकमा जुलुस ल्याएर न्याय पाइँदैन: जुलुस गर्न हामीसँग पैसा छैन: देउवा
लेखक : लेखापढी ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १८:२९ मा प्रकाशित
पोखरा- नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले जुलुस गरेर जुलुसकै आधारमा फैसला गर्ने हो भने न्यायालय किन चाहियो ? भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। संसद विघटनको विषयमा अदालतले गर्ने फैसला कुर्न आग्रह गरेका छन्।
नारा-जुलुस गर्दैमा फैसला हुनुपर्ने किन भन्दै कांग्रेशले जुलुस गर्न पैसा खर्च नगर्ने भन्नु भएको छ । जुलुस गर्न हामी संग पैसा छैन ।
कार्यक्रममा बोल्दै- ‘सडकमा जुलुस ल्याएर न्याय पाइँदैन, हामीसित पैसा पनि छैन। ठाउँ/ठाउँमा जुलुस पुर्‍याउन पनि सक्दैन। जुलुसकै आधारमा फैसला गर्ने हो भने न्यायालय किन चाहियो ? जुलुसमा कति मान्छे आए भनेर हुन्छ ? त्यत्रो जुलुस ल्याउन हामीसित पैसा पनि छैन,’ देउवाले भने।
कोही यो ठिक हो भन्छ, कोही ठिक होइन भन्छ,’ उनले भने, ‘चार वटा कुरा छ, संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक र संसद पुनर्स्थापना कि चुनाव।’
कांग्रेसले के गर्ने भन्नेबारे मिटिङ भइरहेको देउवाले बताए।
‘अब हाम्रो पार्टीले के गर्ने भन्ने कुरा मिटिङ भइराख्या छ। मिटिङ चल्या–चल्यै छ,’ उनले भने, ‘कोही भन्नुहुन्छ संसद फिर्ता हुन्छ, कोही चुनाव हुँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ।’